I-China Gantry Uhlobo lwe-CNC Umshini Wokubhoboza Nowokugaya ifektri nabakhiqizi |I-Oturn
I-CNC Gantry Milling And Drilling Machine
I-Gantry Drilling And Milling Machine
I-BOSM gantry mobile CNC uchungechunge lwemishini yokugaya ngesivinini esiphezulu kanye nomshini wokugaya isetshenziselwa ikakhulukazi ukubhola nokusebenza kahle kwamapuleti amakhulu, ama-flange amandla omoya, ama-discs, izingxenye zendandatho nezinye izinto zokusebenza ezinogqinsi ngaphakathi kwebanga elisebenzayo.Ukubhoboza emigodini nezimbobo eziyimpumputhe kungenziwa ezingxenyeni zempahla eyodwa kanye nezinto eziyinhlanganisela.Inqubo yokwenza imishini yethuluzi lomshini ilawulwa ngedijithali, futhi ukusebenza kulula kakhulu.Ingakwazi ukubona i-automation, ukunemba okuphezulu, izinhlobo eziningi kanye nokukhiqizwa okukhulu.Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokucubungula zabasebenzisi abahlukene, inkampani ithuthukise imikhiqizo ehlukahlukene ephothuliwe.Ngaphezu kwamamodeli ajwayelekile, angabuye aklanywe futhi enziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zangempela zabasebenzisi.
Lezi zisetshenziswa ikakhulukazi ziqukethe izinto zokusebenzisa umbhede, i-gantry ehambayo, isihlalo sesihlalo esinyakazayo, ukubhola kanye nekhanda lamandla okugaya, idivayisi yokuthambisa ezenzakalelayo kanye nedivayisi yokuvikela, idivayisi ejikelezayo yokupholisa, isistimu yokulawula idijithali, isistimu kagesi, njll. i-lead screw pair drive, ithuluzi lomshini linokunemba kokuma okuphezulu nokuphinda ukunemba kokuma.
Umbhede uyi-cast-piece eyodwa, oqedwe ngemva kokwelashwa kokuguga kwesibili kanye nokudlidliza, enokuqina okuhle okuguquguqukayo nokumile futhi akukho ukuguga.Kukhona ama-T-slots anesakhiwo sokuqeda esiphusile endaweni yetafula yokusebenza ukuze kuhlanganiswe ama-workpieces.Isisekelo sombhede sifakwe iziqondiso eziqondile eziqondile ezi-2 eziqondile (ezi-4 nhlangothi zombili seziphelele), ukuze isilayidi somhlahlandlela sigcizelelwe ngokulinganayo, okuthuthukisa kakhulu ukuqina kwethuluzi lomshini kanye nokumelana nokuqina nokucindezela.Uhlelo lokushayela lwamukela ama-AC servo motors kanye namapheya e-screw screw amabhola.I-Side drive yenza i-gantry ihambe iye ohlangothini lwe-X-axis.Ama-bolts alungisekayo asakazwa endaweni engaphansi yombhede, engalungisa kalula izinga le-worktable yombhede.
I-gantry ehambayo iphonswa futhi icutshungulwe ngensimbi empunga (HT250).Amapheya amabili omugqa angama-55# athwele i-ultra-high afakwe ohlangothini olungaphambili lwe-gantry.Isethi yokunemba kwepheya yesikulufu sebhola kanye ne-servo motor yenza ikhanda lamandla lisheleleze liye ohlangothini lwe-Y-eksisi, futhi ikhanda lamandla okubhola lifakwa kusilayidi sekhanda lamandla.Ukunyakaza kwe-gantry kubonakala ngokuzungezisa i-screw nut yebhola kusikulufa sebhola esishayelwa yi-servo motor ngokusebenzisa ukuhlanganisa okunembayo.
Isihlalo sehhashi esishelelayo siyisakhiwo sensimbi esakhiwe ngokunemba.Isihlalo esishelelayo sifakwe amaslayidi esitimela ahambisana nomthwalo aphezulu we-CNC, isethi yamapheya anezikulufu zebhola kanye nesinciphisi seplanethi esinembe kakhulu esixhunywe kunjini ye-servo, futhi ifakwe isilinda se-nitrogen Balance, bhalansisa isisindo ikhanda lamandla, yehlisa umthwalo wesikulufu sokuhola, inwebe impilo yesikulufu sokuhola, shayela ikhanda lamandla okubhola ukuze liye ohlangothini lwe-axis engu-Z, futhi ubone ukusheshisa ukuya phambili, ukusebenzela phambili, ukuhlehla ngokushesha, nokumisa izenzo ze ikhanda lamandla, ngokuphuka kwe-Chip okuzenzakalelayo, ukususwa kwe-chip, umsebenzi wokumisa isikhashana.
4)Ikhanda lamandla okugaya(Spindle):
Ikhanda lamandla okumba lamukela i-servo spindle motor, eshayelwa ukuncishiswa kwebhande le-synchronous elinamazinyo ukuze kwandiswe i-torque futhi ishayela ukuphotha okuqondile okuzinikele.I-spindle ithatha ezine zokuqala nengemuva imigqa emibili eyisithupha yama-angular contact bearings ase-Japan ukuze kuzuzwe ushintsho lwesivinini olungenasinyathelo.I-spindle ifakwe uhlelo lokushintsha ithuluzi lomoya ukwenza ithuluzi Ukushintshwa kuyashesha futhi kulula, futhi okuphakelayo kushayelwa injini ye-servo kanye nesikulufu sebhola.Izimbazo zika-X kanye no-Y zingaxhunywa, kusetshenziswa isilawuli se-loop esivalwe kancane, esikwazi ukubona imisebenzi yokuhumusha ngomugqa kanye neyindilinga.I-spindle end iyimbobo ye-taper ye-BT50, efakwe ijoyinti elijikelezayo le-Italian Rotofors elinesivinini esikhulu, elingasetshenzwa isikhungo se-U-drilling esinesivinini esikhulu.
4.1 Umzimba webhokisi kanye netafula elishelelayo lekhanda lamandla okubhola zenziwe ngokulingisa ukuze kuthuthukiswe ukuqina nokuzinza kwazo, nokunciphisa ukudlidliza nomsindo.
4.2 Ithuluzi lomshini lingasebenza ngesondo lesandla le-elekthronikhi;ukuze wonge isikhathi futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza ngesikhathi sokucubungula, ngemuva kokumba imbobo yokuqala yokusetha indawo yokuphakelayo, ukubhoboza izimbobo ezisele zohlobo olufanayo kungafinyelela phambili ngokushesha → umsebenzi kusengaphambili → ukuhlehla okusheshayo Kufanele futhi kube nemisebenzi efana ne-automatic chip. ukuphuka, ukususwa kwe-chip, nokumisa isikhashana.
4.3 Inqama ifakwe isistimu yebhalansi ye-nitrogen ewuketshezi ukuze yehlise umthwalo we-Z-axis futhi ikhulise impilo yesevisi yesikulufu se-Z-axis.
4.4 I-Z-axis servo motor isebenzisa i-power-off brake motor, ezobamba ibhuleki lapho ugesi unqanyulwa kungazelelwe ukugwema izingozi ezibangelwa ukuwa kwebhokisi lokuphotha.
4.5 Ikhanda lekhanda
4.5.1.Ibhokisi le-shaft eliyinhloko lamukela iziqondiso ezine ezisindayo, ezinokuqina okuphezulu kokunyakaza, ukunemba kokuma okuphezulu, nokuzinza okuhle kwesivinini esiphansi.
4.5.2.I-Z-axis drive-i-servo motor ixhunywe ngokuqondile kusikulufa sebhola ngokusebenzisa ukuhlangana, futhi isikulufu sebhola sishayela isigxobo sekhanda ukuthi siye phezulu naphansi kwisihlalo sehhashi ukuze sibone okuphakelayo kwe-axis engu-Z.I-Z-axis motor ine-automatic brake function.Uma kwenzeka ukwehluleka kwamandla, i-motor shaft ibanjwe ngokuqinile ukuze ivimbele ukujikeleza.
4.5.3.Iqembu lokuphotha lamukela i-Taiwan Jianchun yokuphotha amanzi yangaphakathi enesivinini esikhulu, esinokunemba okuphezulu nokusebenza okuphezulu.I-shaft eyinhloko ibamba ummese nge-butterfly spring ku-shaft eyinhloko ngamandla acindezelayo asebenza esikhonkwaneni sokudonsa sesibambo sethuluzi ngomshini we-broach onezingxenye ezine, futhi ithuluzi elixegayo lisebenzisa indlela yokuphefumula umoya.
5)Idivayisi yokugcoba okuzenzakalelayo kanye nedivayisi yokuzivikela:
Kukhona i-automatic chip conveyor nhlangothi zombili zebhentshi lomsebenzi kanye nesihlungi ekugcineni.I-automatic chip conveyor iwuhlobo lwamaketango ayisicaba.Olunye uhlangothi lufakwe iphampu yokupholisa, futhi i-outlet ixhunywe ohlelweni lokuhlunga amanzi oluphakathi ngepayipi., Isipholile sigelezela kusidluliseli se-chip, iphampu yokuphakamisa i-chip impompa into epholisayo kusistimu yesihlungi se-outlet emaphakathi, futhi iphampu yokupholisa enomfutho ophezulu izungeza isipholile esihlungiwe ekupholiseni kokumba ukupholisa nge-spindle.Iphinde ifakwe i-chip transport trolley, elula kakhulu ukuthutha ama-chips.Lokhu okokusebenza kufakwe amasistimu okupholisa amathuluzi angaphakathi nangaphandle.Uma kusetshenziswa ukumba ngesivinini esiphezulu, ukupholisa kwangaphakathi kwethuluzi kusetshenziswa, futhi ukupholisa kwangaphandle kusetshenziselwa ukugaya ukukhanya.
5.1.Isistimu yokuhlunga amanzi ephuma emaphakathi:
Leli thuluzi lomshini lifakwe isistimu yokuhlunga amanzi emaphakathi, engakwazi ukuhlunga ngempumelelo ukungcola endaweni epholile.Uhlelo lwangaphakathi lwesifutho samanzi lungavimbela izikhonkwane zensimbi ukuthi zingabambeki ethuluzini phakathi nokucubungula, ukunciphisa ukuguga kwamathuluzi, ukunweba ukuphila kwamathuluzi, futhi kuthuthukise ukuqedwa kwendawo yokusebenza.Iphinikhodi yokukhipha amanzi enomfutho ophezulu wethuluzi ingavikela kahle indawo yokusebenza, ivikele ijoyinti elijikelezayo elinesivinini esikhulu, ivimbele ukungcola ekuvimbeni ilunga elijikelezayo, futhi ithuthukise ikhwalithi yesiqeshana sokusebenza sisonke, futhi ithuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
I-clamp yakhiwe indikimba eyinhloko ye-clamp, ama-actuator, njll. Iyingxenye esebenza kahle kakhulu esetshenziswa ngokuhambisana nokupheya komugqa ohambayo.Ngokusebenzisa isimiso sokunwetshwa kwe-wedge block force, ikhiqiza amandla okubamba aqinile;ine-gantry engaguquki, ukuma okunembile, i-anti-vibration kanye nomsebenzi wokuthuthukisa ukuqina.
Amandla okubamba aphephile futhi athembekile, abamba i-eksisi ye-XY enganyakazi phakathi nokubhoboza nokuthepha.
Amandla okubamba aphakeme kakhulu anyusa ukuqina kokuphakelayo kwe-axial futhi avimbele ukukhathazeka okubangelwa ukudlidliza.
Ukusabela okusheshayo, isikhathi sokuphendula sokuvula nokuvala singamasekhondi angu-0.06 kuphela, esingavikela ithuluzi lomshini futhi andise impilo yesikulufu sokuhola.
Indawo ehlala isikhathi eside, ene-nickel-plated, ukusebenza okuhle kwe-anti-rust.
Idizayini yenoveli yokugwema umthelela oqinile lapho uqina.
7)Ukuma kanye nokuqiniswa kwe-workpiece
Ukuze i-workpiece ye-flange eyindilinga iqondaniswe, ingabekwa ngokungafanele epuletini lokusekela elinama-T-slots, futhi indawo emaphakathi ikalwa ngesitholi sonqenqema esifakwe embotsheni ye-spindle taper kunoma yimaphi amaphuzu amathathu (ububanzi bangaphakathi noma ububanzi bangaphandle) endaweni yokusebenza. .Ngemuva kwalokho, itholakala ngokuzenzakalelayo ngokubala kohlelo lokulawula izinombolo, olunembile futhi olusheshayo.I-clamping ye-workpiece iboshiwe yi-clamp eyakhiwe ipuleti lokucindezela, induku ye-ejector, induku yokubopha kanye ne-cushion block, okulula ukuyisebenzisa.
8)Idivayisi yokugcoba ngokuzenzakalelayo
Leli thuluzi lomshini lifakwe i-Taiwan's original volumetric partial lubrication lubrication device, engakwazi ukugcoba ngokuzenzakalelayo amapheya ahlukahlukene anyakazayo njengamareyili angumhlahlandlela, izikulufu zokuhola, amarack, njll., ngaphandle kweziphetho ezifile, futhi iqinisekise impilo yesevisi yethuluzi lomshini.Ama-rails aqondisayo ezinhlangothini zombili zombhede womshini afakwe izembozo zokuzivikela zensimbi engagqwali, futhi izinhlangothi zombili zekhanda lamandla e-gantry ezihambayo zifakwe izembozo zokuzivikela eziguquguqukayo.Onogada be-splash abangangeni amanzi bafakwe eduze kwetafula lokusebenza, futhi ulayini wepayipi lamanzi uvikelwe iketango lokudonsa lepulasitiki.Ikhethini elithambile le-PVC elikhanyayo lifakwe eduze kwe-spindle.
9)Isilawuli esigcwele sedijithali se-CNC:
9.1.Ngokusebenza kokuphulwa kwe-chip, isikhathi sokuphulwa kwe-chip kanye nomjikelezo wokuphulwa kwe-chip kungasethwa kusixhumi esibonakalayo somshini womuntu.
9.2.Ngomsebenzi wokuphakamisa ithuluzi, ubude bokuphakamisa ithuluzi bungasethwa kusixhumi esibonakalayo somshini womuntu.Uma ubhoboza lokhu kuphakama, i-drill bit iphakanyiswa ngokushesha phezulu kwe-workpiece, bese i-shavings, bese ihamba ngokushesha endaweni yokubhoboza futhi iguqulelwe ngokuzenzakalelayo ibe yisiphakeli somsebenzi.
9.3.Ibhokisi eliphakathi nendawo elilawula ukusebenza kanye neyunithi ephathwa ngesandla yamukela isistimu yokulawula izinombolo, futhi ifakwe isixhumi esibonakalayo se-USB nesibonisi sekristalu esiwuketshezi se-LCD.Ukuze kube lula ukuhlela, ukugcinwa, ukuboniswa nokuxhumana, okusetshenziswa kubonwa kunemisebenzi efana nengxoxo yomshini womuntu, isinxephezelo samaphutha, ne-alamu ezenzakalelayo.
9.4.Imishini inomsebenzi wokuhlola kuqala nokuhlola kabusha indawo yembobo ngaphambi kokucubungula, okulula kakhulu ukusebenza.
10)Isitholi se-Optical edge:
Imishini ifakwe isitholi se-photoelectric edge, esingathola isikhundla se-workpiece kalula futhi ngokushesha.
1) Faka isitholi sonqenqema ku-spindle chuck yethuluzi lomshini, bese uzungezisa kancane ukuphotha ukuze ulungise ukugxila kwaso.
2) Hambisa i-spindle ngesondo lesandla, ukuze unqenqema lwebhola lensimbi yesitholi sonqenqema lithinte ucezu lokusebenza kalula, futhi ukukhanya okubomvu kuvuliwe.Ngalesi sikhathi, i-spindle ingayiswa phambili nangemuva ngokuphindaphindiwe ukuze uthole iphoyinti elingcono kakhulu lapho unqenqema lwebhola lensimbi lesitholi sonqenqema lithinta ucezu lokusebenza..
3) Rekhoda amanani e-eksisi u-X kanye no-Y aboniswe uhlelo lwe-CNC ngalesi sikhathi, bese ugcwalisa ikhompuyutha.
4) Thola amaphuzu amaningi okuthola ngale ndlela
11)I-alamu yokugqoka ithuluzi
I-alamu yokugqoka ithuluzi ithola ngokuyinhloko ukusebenza kwemoto yokuphotha.Uma i-current idlula inani elisethiwe, idivayisi ihlulela ngokuzenzakalelayo ukuthi ithuluzi ligugile, futhi i-spindle izohoxisa ithuluzi ngokuzenzakalelayo ngalesi sikhathi, futhi uhlelo oluzenzakalelayo luzophela.Khumbuza opharetha ukuthi ithuluzi seligugile.
12)I-alamu yezinga lamanzi aphansi
1) Uma isipholile esisefini sisezingeni eliphakathi, isistimu ixhumeka ngokuzenzakalelayo kumotho ukuze iqale, futhi into epholisayo ku-chip conveyor igeleza ngokuzenzakalelayo iye kusihlungi.Uma ifika ezingeni eliphezulu, injini iyayeka ukusebenza ngokuzenzakalelayo.
I-2) Uma i-coolant kusihlungi isezingeni eliphansi, isistimu izokwazisa ngokuzenzakalelayo i-gauge yezinga, i-spindle izohoxisa ithuluzi ngokuzenzakalelayo, futhi umshini uzoyeka ukusebenza.
13) Umsebenzi wenkumbulo yokucisha amandla
Ngenxa yokuma kokusebenza okubangelwa ukuhluleka kwamandla kungazelelwe, lo msebenzi ungathola ngokushesha futhi kalula indawo yembobo yokugcina ebhodliwe ngaphambi kokuhluleka kwamandla.Ama-opharetha angaqhubekela esinyathelweni esilandelayo ngokushesha, alondoloze isikhathi sokusesha.
Ukuhlolwa kwe-laser yama-axis amathathu:
Umshini ngamunye we-Bosman ulinganiswa ne-laser interferometer yenkampani yaseBrithani i-RENISHAW, futhi uhlola ngokunembile futhi unxephezele iphutha le-pitch, ukuhlehla, ukunemba kokuma, ukuphinda ukunemba kokuma, njll., ukuze kuqinisekiswe ukuguquguquka, ukuzinza okuqinile kanye nokunemba kokucubungula komshini. .Ukuhlolwa kwe-Ballbar Umshini ngamunye usebenzisa ibha yebhola yenkampani yaseBrithani i-RENISHAW ukulinganisa ukunemba kwendingilizi yangempela kanye nokunemba komshini kwejiyomethri.Ngasikhathi sinye, kwenziwa isilingo sokusika esiyindilinga ukuze kuqinisekiswe ukunemba komshini we-3D womshini kanye nokunemba kwendilinga.
Isakhiwo seplathifomu, i-clamping ye-workpiece, izidingo zokususwa kwe-chip ezizenzakalelayo
1. Ipulatifomu eyinhloko (ama-pcs angu-1): Isiqephu sokusebenza se-T-slot clamping.Kokubili indawo ephezulu yokuphela kanye nendawo eseceleni yesikhulumi esikhulu ingasetshenziswa njengokucubungula izindawo zokuma.
2. Ipulatifomu yokucwila (1 ama-pcs): (uhlangothi lufakwe uhlaka olusizayo lokufaka ukucindezela, futhi phezulu kufakwe isembozo sokuzivikela esigcwele, esiklanywe futhi sifakwe umdayisi), indawo eyinhloko yokubeka i-workpiece nemiyalo yokucubungula:
Ukucutshungulwa kwekhava ye-valve: ukumiswa kweplatifomu engezansi (isibambo esisekela esiphansi kanye nezingxenye zokusebenza ezinosayizi abahlukene), ipuleti lokucindezela eliphezulu lilungiswa ngokucindezela noma umdayisi uklama idivayisi yokunamathisela phezulu okuzenzakalelayo.
Ukucutshungulwa komzimba we-valve: ukumiswa kweplatifomu engezansi (izibambo ezisekela ngezansi nezingxenye zokusebenza ezinosayizi abahlukene), izibambo eziseceleni zekholomu eyisiza yeplathifomu ephansi kanye nezinduku zokukhipa ezimise okwe-L ziyacindezelwa futhi ziyalungiswa noma umdayisi uklama okuzenzakalelayo okungaphezulu. idivayisi yokubopha.
Inhloko Yokubhoboza Emile
Ububanzi Bokubhoboza (mm)
Isivinini se-Spindle (r/min)
Phinda Ukunemba Kokumisa (X/Y/Z)
Ithuluzi lomagazini we-Okada elinamathuluzi angama-24 njengokuzithandela
Umshini ngamunye we-Bosman ulinganiswa nge-laser interferometer evela enkampanini ye-RENISHAW yase-United Kingdom, ehlola ngokunembile futhi inxephezele amaphutha e-pitch, ukuhlehla, ukunemba kokuma, nokunemba kokuma okuphindaphindiwe ukuze kuqinisekiswe ukuguquguquka komshini, ukuzinza okumile, kanye nokunemba kokucubungula..Ukuhlolwa kwebha yebhola Umshini ngamunye usebenzisa isihloli sebha yebhola evela enkampanini yaseBrithani i-RENISHAW ukuze ulungise ukunemba kwendingilizi yeqiniso kanye nokunemba komshini wejometri, futhi wenze izivivinyo zokusika eziyindilinga ngesikhathi esifanayo ukuze kuqinisekiswe ukunemba komshini we-3D womshini kanye nokunemba kwendingilizi.
Indawo yokusebenzisa ithuluzi lomshini
1.1 Izidingo zemvelo yezinto zokusebenza
Ukugcina izinga eliqhubekayo lokushisa elizungezile kuyisici esibalulekile somshini wokunemba.
(1) Izinga lokushisa le-ambient elitholakalayo ngu- -10 ℃ ～ 35 ℃.Lapho izinga lokushisa lendawo lingama-20 ℃, umswakama kufanele ube ngu-40 ~ 75%.
(2) Ukuze kugcinwe ukunemba okumile kwethuluzi lomshini ngaphakathi kwebanga elishiwo, izinga lokushisa elifanele le-ambient liyadingeka ukuthi libe ngu-15 ° C kuya ku-25 ° C nomahluko wokushisa.
Akufanele idlule ± 2 ℃ / 24h.
1.2 I-voltage yokuphakelwa kwamandla: 3-isigaba, 380V, ukushintshashintsha kwamandla kagesi ngaphakathi ± 10%, imvamisa yokuphakelwa kwamandla: 50HZ.
1.3 Uma i-voltage endaweni esetshenziswayo ingazinzile, ithuluzi lomshini kufanele lifakwe ugesi olawulwayo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuvamile kwethuluzi lomshini.
1.4.Ithuluzi lomshini kufanele libe nendawo ephansi enokwethenjelwa: intambo yaphansi iyintambo yethusi, ububanzi bocingo akufanele bube ngaphansi kuka-10mm², futhi ukumelana nomhlabathi kungaphansi kuka-4 ohms.
1.5 Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuvamile kwemishini, uma umoya ocindezelwe womthombo womoya wehluleka ukuhlangabezana nezidingo zomthombo womoya, isethi yamadivayisi okuhlanza umthombo womoya (ukukhipha umswakama, ukwehlisa, ukuhlunga) kufanele kwengezwe ngaphambi kokukhishwa kwemishini. ukungena komoya womshini.
1.6.Izinto ezisetshenziswayo kufanele zigcinwe kude nelanga eliqondile, ukudlidliza kanye nemithombo yokushisa, futhi kude namajeneretha anemvamisa ephezulu, imishini yokushisela kagesi, njll., ukuze kugwenywe ukwehluleka kokukhiqiza umshini noma ukulahlekelwa ukunemba komshini.
Ngaphambi Nangemuva Kwesevisi
1) Ngaphambi Kwesevisi
Ngokutadisha isicelo kanye nolwazi oludingekayo oluvela kumakhasimende bese impendulo konjiniyela bethu, ithimba le-Bossman Technical linesibopho sokuxhumana nobuchwepheshe namakhasimende kanye nokwakhiwa kwezixazululo, ukusiza ikhasimende ekukhetheni isisombululo esifanele somshini kanye nemishini efanelekile.
2) Ngemva Kwesevisi
A. Umshini onewaranti yonyaka owodwa futhi okhokhelwe ukunakekela impilo yonke.
B. Phakathi nenkathi yewaranti yonyaka owodwa ngemva kokuba umshini ufikile echwebeni lapho uya khona, i-BOSSMAN izohlinzeka ngezinsizakalo zokunakekela zamahhala nezifika ngesikhathi zamaphutha ahlukahlukene angenziwanga umuntu emshinini, futhi ibuyisele ngesikhathi zonke izinhlobo zezingxenye zomonakalo ongenziwanga umuntu mahhala. yenkokhiso .Ukwehluleka okwenzeka ngesikhathi sewaranti kuzolungiswa ngezindleko ezifanele.
Ukusekelwa kwe-C.Technical emahoreni angama-24 ku-inthanethi, i-TM, i-Skype, i-E-mail, ukuxazulula imibuzo ehlobene ngesikhathi.uma ingeke ixazululwe, i-BOSSMAN izohlela ngokushesha ukuthi unjiniyela wangemva kokuthengisa afike esizeni ukuze alungiswe, umthengi udinga ukukhokhela i-VISA, amathikithi ezindiza kanye nendawo yokuhlala.
Okwedlule: I-Lathe Yokucupha Ipayipi Yekhwalithi ephezulu ye-CNC
Olandelayo: I-China Three Face Turning Lathe yomzimba weValve
Umshini Wokubhoboza we-CNC Tube
Umshini Wokugaya Osindayo we-CNC
I-Light Duty CNC Drilling Milling Machine
Umshini Wokubhoboza we-Station Shaft Flange